“အချစ်ဖွဲ့လေညှင်း” ဇာတ်ကားထဲက မိုးကလျာဇာတ်ရုပ်ကိုပီပြင်ဖို့ကြိုးစားရင်း ကိုယ်အလေးချိန် (၁၅)ပေါင်တက်သွားတဲ့အကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ ခင်သဇင် - The Moon MM
“အချစ်ဖွဲ့လေညှင်း” ဇာတ်ကားထဲက မိုးကလျာဇာတ်ရုပ်ကိုပီပြင်ဖို့ကြိုးစားရင်း ကိုယ်အလေးချိန် (၁၅)ပေါင်တက်သွားတဲ့အကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ ခင်သဇင်
May 23, 2020 Wai Lu cele 0
ပရိသတ်ရဲ့အချစ်တော်မင်းသမီးလေး ခင်သဇင်ကတော့ ပရိသတ်အားပေးမှုများစွာရရှိနေတဲ့ သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့ ကျရာဇာတ်ရုပ်ကို အကောင်းဆုံးပီပြင်အောင်သရုပိဆောင်နိုင်တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦးဆိုလဲမမှားပါဘူးနော်။လက်ရှိမှာတော့ ခင်သဇင်ကMRTV-4 မှာထုတ်လွှင့်ပြသနေတဲ့ အချစ်ဖွဲ့လေညှင်းဇာတ်လမ်းတွဲမှာ မိုးကလျာဆိုတဲ့ ဗီလိန်ဇာတ်ရုပ်နဲ့ ပါဝင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အခုဆိုရင်တော့ ခင်သဇင်က မိုးကလျာဇာတ်ရုပ်ကိုပီပြင်ဖို့ကြိုးစားရင်း ကိုယ်အလေးချိန် (၁၅)ပေါင်တက်သွားတဲ့အကြောင်း အခုလိုပဲရင်ဖွင့်လာခဲ့ပါတယ်။သူမကတော့ “ချစ်ပရိသတ်ကြီးကို ရင်ဖွင့်ရဦးမယ်သိလား ?? ဒီကားမှာ ဝလာတယ်ပြောကြတယ်.. ဟုတ်ပါတယ် .. အဲကားကိုရိုက်ရင်း ၁၅ ပေါင်တက်သွားခဲ့တယ် ..😭ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ မိုးကလျာ ရဲ့ စိတ်ကို အမှီလိုက်ရလို့ပါ .. သူဖြစ်ချင်တာတွေက သိပ်များတယ် .. စိတ်ကြီးတယ် .. လောဘကြီးတယ်.. အညှိုးကြီးတယ် .. အပြင်က ခင်သဇင်ကတော့ အေးဆေးပဲ ဆိုတော့ .. ဒီ ဇာတ်ရုပ်ဖြစ်တဲ့ မိုးကလျာရဲ့ ဖြစ်ချင်နေတဲ့ စိတ်တွေ နောက်ကို အမှီလိုက်ရတာ အရမ်း stress စိတ်ဖိစီးမှုတွေ များခဲ့တယ် ..
မိုးကလျာရဲ့ ရင်ထဲမှာလည်း ရှုပ်ထွေးမှုတွေ များစွာနဲ့ မွန်းကျပ်ပြီး မပျော်ရွှင်ခဲ့ရဘူး …. အဲဒါကြောင့် ခါတိုင်း ရှူတင်တွေထက် ပိုစားခဲ့တယ်.. မိုးကလျာ ဖြစ်ပြီးတိုင်း ရှုတင် ပြီး တဲ့ အချိန်တိုင်းရဲ့ ထွက်ပေါက်က စားတာပဲ .. နေ့ညတွေ ရိုက်ခဲ့ရတော့ နေ့ရော ညရော အသေတွေစားခဲ့တယ် .. gym သွားချိန်လည်း မရှိ.. ပြန်လာရင် ထိုးအိပ်နဲ့ .. ရိုက်ကူးရေးကာလ ၅ လကျော်လောက်မှာ ဝိတ်က ၁၅ ပေါင် အထိ တက်သွားခဲ့ပါတယ် .. အခုတော့ အဲဒီ ၁၅ ပေါင်ကို ပြန်ချထားပါပြီ😁😁😁နောက်တစ်ခါ စိတ်ကြီးတဲ့ ကားတွေ ရိုက်ရင် ရေလုံပြုတ်စားမှ ဖြစ်ပါတော့မယ်.. ကိုယ့် အဆီတွေကို ပြန်မြင်နေရတာ စိတ်မချမ်းသာဘူး တကယ် ”ဆိုပြီး သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ ရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ….။
“အခ်စ္ဖြဲ႕ေလညႇင္း” ဇာတ္ကားထဲက မိုးကလ်ာဇာတ္႐ုပ္ကိုပီျပင္ဖို႔ႀကိဳးစားရင္း ကိုယ္အေလးခ်ိန္ (၁၅)ေပါင္တက္သြားတဲ့အေၾကာင္း ေျပာျပလာတဲ့ ခင္သဇင္
ပရိသတ္ရဲ႕အခ်စ္ေတာ္မင္းသမီးေလး ခင္သဇင္ကေတာ့ ပရိသတ္အားေပးမႈမ်ားစြာရရွိေနတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။သူမကေတာ့ က်ရာဇာတ္႐ုပ္ကို အေကာင္းဆုံးပီျပင္ေအာင္သ႐ုပိေဆာင္ႏိုင္တဲ့ အႏုပညာရွင္တစ္ဦးဆိုလဲမမွားပါဘူးေနာ္။လက္ရွိမွာေတာ့ ခင္သဇင္ကMRTV-4 မွာထုတ္လႊင့္ျပသေနတဲ့ အခ်စ္ဖြဲ႕ေလညႇင္းဇာတ္လမ္းတြဲမွာ မိုးကလ်ာဆိုတဲ့ ဗီလိန္ဇာတ္ရုပ္နဲ့ ပါ၀င္ထားတာပဲျဖစ္ပါတယ္။
အခုဆိုရင္ေတာ့ ခင္သဇင္က မိုးကလ်ာဇာတ္႐ုပ္ကိုပီျပင္ဖို႔ႀကိဳးစားရင္း ကိုယ္အေလးခ်ိန္ (၁၅)ေပါင္တက္သြားတဲ့အေၾကာင္း အခုလိုပဲရင္ဖြင့္လာခဲ့ပါတယ္။သူမကေတာ့ “ခ်စ္ပရိသတ္ႀကီးကို ရင္ဖြင့္ရဦးမယ္သိလား ?? ဒီကားမွာ ဝလာတယ္ေျပာၾကတယ္.. ဟုတ္ပါတယ္ .. အဲကားကို႐ိုက္ရင္း ၁၅ ေပါင္တက္သြားခဲ့တယ္ ..😭ဘာလို႔လဲ ဆိုေတာ့ မိုးကလ်ာ ရဲ႕ စိတ္ကို အမွီလိုက္ရလို႔ပါ .. သူျဖစ္ခ်င္တာေတြက သိပ္မ်ားတယ္ .. စိတ္ႀကီးတယ္ .. ေလာဘႀကီးတယ္.. အညႇိဳးႀကီးတယ္ .. အျပင္က ခင္သဇင္ကေတာ့ ေအးေဆးပဲ ဆိုေတာ့ .. ဒီ ဇာတ္႐ုပ္ျဖစ္တဲ့ မိုးကလ်ာရဲ႕ ျဖစ္ခ်င္ေနတဲ့ စိတ္ေတြ ေနာက္ကို အမွီလိုက္ရတာ အရမ္း stress စိတ္ဖိစီးမႈေတြ မ်ားခဲ့တယ္ ..
မိုးကလ်ာရဲ႕ ရင္ထဲမွာလည္း ရႈပ္ေထြးမႈေတြ မ်ားစြာနဲ႔ မြန္းက်ပ္ၿပီး မေပ်ာ္႐ႊင္ခဲ့ရဘူး …. အဲဒါေၾကာင့္ ခါတိုင္း ရႉတင္ေတြထက္ ပိုစားခဲ့တယ္.. မိုးကလ်ာ ျဖစ္ၿပီးတိုင္း ရႈတင္ ၿပီး တဲ့ အခ်ိန္တိုင္းရဲ႕ ထြက္ေပါက္က စားတာပဲ .. ေန႔ညေတြ ႐ိုက္ခဲ့ရေတာ့ ေန႔ေရာ ညေရာ အေသေတြစားခဲ့တယ္ .. gym သြားခ်ိန္လည္း မရွိ.. ျပန္လာရင္ ထိုးအိပ္နဲ႔ .. ႐ိုက္ကူးေရးကာလ ၅ လေက်ာ္ေလာက္မွာ ဝိတ္က ၁၅ ေပါင္ အထိ တက္သြားခဲ့ပါတယ္ .. အခုေတာ့ အဲဒီ ၁၅ ေပါင္ကို ျပန္ခ်ထားပါၿပီ😁😁😁ေနာက္တစ္ခါ စိတ္ႀကီးတဲ့ ကားေတြ ႐ိုက္ရင္ ေရလုံျပဳတ္စားမွ ျဖစ္ပါေတာ့မယ္.. ကိုယ့္ အဆီေတြကို ျပန္ျမင္ေနရတာ စိတ္မခ်မ္းသာဘူး တကယ္ ”ဆိုျပီး သူ့ရဲ့လူမွုကြန္ရက္စာမ်က္နွာကေန ေရးသားထားတာပဲျဖစ္ပါတယ္ ပရိသတ္ျကီးေရ….။
ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူအတွက်ရည်စူးပြီး လူ ၃၀၀စာ အာဟာရဒါနလှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ဝါဝါဝင်းရွှေ
အမေစုရဲ့ Covid -19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် အိမ်တွင်းဖြစ်ပိတ်စနှာခေါင်းစည်းချုပ်လုပ်မှုပြိုင်ပွဲမှာ ဒုတိယဆုရရှိခဲ့တဲ့ ဒီဇိုင်နာမျိုးမင်းစိုး